Chelsea Oo Qorshe Cusub Haaland Ku Helaysa, Mourinho Oo Xiddig Ka Doonaya Man United & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa - Laacib
HomeBundesligaChelsea Oo Qorshe Cusub Haaland Ku Helaysa, Mourinho Oo Xiddig Ka Doonaya Man United & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
Chelsea Oo Qorshe Cusub Haaland Ku Helaysa, Mourinho Oo Xiddig Ka Doonaya Man United & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
July 15, 2021 Apdihakem Omer Adam Bundesliga, PSG, Serie A, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Daafaca midig ee kooxda Atletico Madrid ee Kieran Trippier ayay ka go’antahay inuu kusoo laabto horyaalka Premier League wuxuuna sugayaa heshiis uu Man United ugu dhaqaaqayo. (Telegraph – subscription needed)
Everton ayaa dalab furitaan ah ka gudbisay daafaca dhexe ee kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly kaas oo la sheegay inuu bar-tilmaameedka koowaad ee tababare Rafael Benitez yahay. (Calciomercato)
Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inay dalab 60 Milyan oo pound ah u diyaarinayso xiddigii xulka Talyaaniga kula guuleystay Euro ee icolo Barella oo Inter Milan ka tirsan. (La Repubblica)
Liverpool ayay macquul tahay inay mid ahaan Xherdan Shaqiri iyo Divick Origi ku darto heshiiska ay Saul Niguez kaga doonayso Atletico Madrid. (Daily Express)
Chelsea ayaa weeraryahankeeda Tammy Abraham ku daraysa heshiiska ay Borussia Dortmund kaga soo qaadanayso Erling Haaland. (Mirror)
West Ham ayaa ku dhaw inay Paris Saint-Germain heshiis hal sano oo amaah ah oo ay sanadka dambe si rasmi ah u iibsanayso kaga soo qaadato goolhaye Alphonse Areola. (Evening Standard)
Arsenal daafaceeda Hector Bellerin ayaan wali heshiiska shaqsiga ah la gaadhin Inter Milan balse kooxdaasi ayaa lagu sifeeyay mida ugu cad-cad saxeexiisa. (Football.london)
Dhinaca kale khadka dhexe ee Arsenal ee Joe Willock ayaa u sheegay kooxdaasi inuu doorbidayo inuu markale qaab amaah ah ugu biiro Newcastle United. (Daily Express)
Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta ayaa sheegay inuusan iib ahayn 20 sano jirka kooxdiisa ee Emile Smith Rowe oo xiiso ka helaya Aston Villa. (HITC)
Leicester City ayaa heshiis cusub oo mudo dheer ah u bandhigtay Youri Tielemans iyaga oo kalsooni ku qaba inuu kooxda sii joogi doono walow lala xidhiidhinayo Liverpool. (Telegraph – subscription needed)
Goolhayaha Liverpool ee Alisson Becker ayaa ku dhaw inuu heshiis cusub oo mudo dheer ah u saxeexo kooxdaas.. (HITC via Here We Go Podcast)
Barcelona ayaa ku dhawaad dhammaystirtay heshiiska ay Antoine Griezmann kooxdiisii hore ee Atletico Madrid dib ugu dirayso iyadoo kusoo bedelanaysa Saul Niguez. (Mail)
Tottenham ayaa ku jirta dhawr kooxood oo Premier League ah oo xiisaynaysa weeraryahanka American-ka ah ee kooxda Schalke ee Matthew Hoppe oo 20 sano jir ah. (The Boot Room)
Heshiiska amaahda ah ee uu daafaca Man United ee Brandon Williams ugu biirayo Southampton ayaa halis ku jira kaddib dalabaadka lacageed ee Man United. (talkSPORT)
Tababaraha AS Roma ee Jose Mourinho ayaa kooxdiisii hore ee Man United qaab amaah ah kaga doonaya daafaca bidix ee Alex Telles oo uu bedel uga dhigayo xiddiga ka dhaawacan ee Leonardo Spinazzola. (Daily Star)
Arsenal iyo Liverpool ayaa seegaya 22 sano jirka PSV ee Donyell Malen kaas oo heshiiska shaqsiga ah la gaadhay Borussia Dortmund oo uu bedelka Jadon Sancho u noqonayo. (Just Arsenal via Sports Bild)
Tottenham ayaa ku dhaw saxeexa daafaca kooxda Bologna ee Takehiro Tomiyasu kaas oo heshiis 15 Milyan oo pound ah ugu soo wareegaya. (The Athletic – subscription needed)